Gabar dhalinyaro oo fulisay weerarkii Gaalkacyo iyo macluumaad kale | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Gabar dhalinyaro oo fulisay weerarkii Gaalkacyo iyo macluumaad kale
Wax yar uun ka dib markii weerarka uu ka dhacay afaafka hore ee Xarunta Maamulka Gobolka Mudug ee Waqooyiga Gaalkacyo ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in qofka ismiidaamiyay uu watay mooto bajaaj, waxaase iminka soo baxaya warar kale oo ka duwan.
Waxaa jira warar sheegaya in qofka ismiidaamiyay uu la socday gaari NOHA ahaa, isla-markaana uu bartilmaameedsaday gaarigii gaarka ahaa ee uu la socday Gudoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland, Axmed Muuse Nuur.
Ismiidaaminta waxaa lagu dilay Gudoomiyihii Gobolka Mudug ee dhanka Puntland iyo saddex qof oo kale (Walaalkii iyo laba ka mida ilaaladiisii). Waxaa sidoo kale ku dhimatay qof dumar ah oo goob ganacsi halkaasi ku haysatay iyo gabadhii is qarxisay.
Mooto bajaajta loo maleeyay in weerarka lagu fuliyay ayaa waxaa saarnaa darawalkii oo qura, kaasoo markaasi doonayay in uu halkaasi ka qaado Maxamed Muuse Nuur, oo la dhashay Gudoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland. Gudoomiyaha iyo walaalkii oo markaasi uun is macsalaameeyay ayaa dhagartaan ku dhacay.
Laamaha amniga ee Puntland ayaa la wareegay meydka gabadhii weerarka fulisay, taasoo goobtaasi laga helay qoorteeda oo keliya, halka intii kale ee jirkeeda aan la helin. Inta badan qofka is qarxiya ayaa la helaa madaxiisa oo ka go’an jirka intiisa kale.
Arrinta dareenka dadka ku abuureyso waxaa weeye in weerarkii 24-kii bishii July ee 2019 ka dhacay Magaalada Muqdisho, laguna dilay masuuliyiin uu ugu sareeyay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yariisow) in ay fulisay ruux dumar ah.
Weerarkii 29-kii bishii March ka dhacay Magaalada Garoowe, laguna dilay Gudoomiyihii Gobolka Nugaal, Cabdisalaan Xasan Xersi (Gujir) ayaase ka duwanaa weeraradaasi kale, haddii uu fuliyay nin isa soo miidaayay, balse waxaa ay ka wada siman yihiin in dhammaantood ay ismiidaamiye-yaal ahaayeen.
Hase ahaatee saddexdaan weerar oo wax ka yar sanad uun dhacay ayay dadka qaarkood ku baraarugeen, ka dib markii dadka wax ku qora barraha bulshada ay iftiimiyeen in Shabaabku markaan uu weerar ku yahay Gudoomiye-yaasha Gobolada Dalka, gaar ahaan kuwooda hoggaaminaya hawlgalada gobolada looga sifeynayo.
Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Puntland ayaa wacad ku maray in ay ciqaab adag marsiin doonaan kuwii ka masuulka ahaa labadii qarax ee siyaabooyinka kala duwan loogu kala dilay Gudoomiye-yaashii Gobolada Nugaal iyo Mudug.
Madaxweyne Deni ayaa xalay sheegay in ay dad u hayaan dilka Gudoomiyihii Gobolka Nugaal, iminkana ay ku daba jooggaan kuwii ka masuulka ahaa dilka Gaalkacyo loogu gaystay Gudoomiyihii Gobolka Mudug.
Dhanka kale Kooxda Bisha Cas Somaliya ayaa gurmadkii ugu horeeyay oo ceynkiisa ah ka sameysay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Muuqaalo lagu baahiyay barraha bulshada ayaa muujinaya Kooxda Bisha Cas, oo halkaasi ka daad-gureyneysa meydadka dadkii ku dhintay weerarka bahalnimada ahaa ee Axadii ka dhacay Gaalkacyo.